G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) – Gold Channel Movies
When all else fails, they don't.Aug. 04, 2009Czech Republic118 Min.PG-13
ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ လူးဝစ်ဘုရင်တွေအုပ်စိုးတဲ့ခေတ်ကတည်းက မက်ကူလန်မျိုးနွယ်ဟာ စစ်ပွဲတွေမှာ နှစ်ဘက်စလုံးကို လက်နက်ရောင်းချလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုရောင်းချနေတဲ့အကြောင်းကို တစ်နေ့မှာ တစ်ဖက်ဘုရင်ကသိသွားပြီး မက်ကူလန်မျိုးနွယ်သားတစ်ယောက်ကို အပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေတ်တွေပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက် မက်ကူလန်မျိုးနွယ်ဟာလည်း တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် မျိုးနွယ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ မက်ကူလန်မျိုးနွယ်သားတစ်ယောက်ဟာ ပြင်သစ်တွေကို အဆင့်မြင့်လက်နက်တွေနဲ့ လက်စားချေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒုခ်နဲ့ရစ်ပ်ကော့တို့ဟာ အဆင့်မြင့်တပ်ဖွဲ့တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ G.I.Joe အဖွဲ့ထဲ‌ ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်၊ G.I.Joe ဆိုတာ နိုင်ငံတကာစစ်တပ်တွေရဲ့ထိပ်တန်းစစ်သားတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အထူးတပ်ဖြစ်ပြီး အဆင်မြင့်လက်နက်တွေနဲ့ ကာကွယ်ပေးတဲ့အဆင့်မြင့်တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မက်ကူလန်မျိုးနွယ်သားဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ G.I.Joe အဖွဲ့တို့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တွေ့မလဲ၊ ပြင်သစ်ကိုလက်စားချေဖို့လုပ်နေတဲ့ မက်ကူလန်ကို ဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအလှည့်အပြောင်းတွေကလည်း အားရစရာကောင်းတဲ့အပြင် တိုက်ခိုက်ခန်းတွေကလည်း အနှစ်ကျလှပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Dear John ဇာတ်ကားရဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင် Channing Tatum၊ 500days of summer ဇာတ်ကားရဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင် Joseph Levitt တို့အပြင် Irisဇာတ်ကားကြီးရဲ့ အဓိကမင်းသား Lee Byung Hun တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။
Translated and Review by Z
TMDb Rating 5.7 3,630 votes